Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Nyowani Nherera Mushonga Dhizaini yeKurapwa kweFollicular Lymphoma
CASI Pharmaceuticals, Inc., kambani yekuUS biopharmaceutical yakatarisana nekugadzira nekutengesa hunyanzvi hwekurapa uye zvigadzirwa zvemishonga, yakazivisa nhasi, kuti US Food and Drug Administration (FDA) yakapa Orphan Drug Disignation (ODD) kune mumwe wayo BioInvent International AB, kuti. BI-1206, an investigational anti-FcyRllB antibody, yekurapa follicular lymphoma (FL), iyo inowanzozivikanwa yeinononoka-kukura Non-Hodgkin lymphoma (NHL).
BI-1206 ndiyo inotungamira mushonga weBioInvent uye parizvino iri kuferefetwa mumaedzo maviri eChikamu 1/2. Imwe ndeyekuongorora BI-1206 musanganiswa ne rituximab pakurapwa kweNon-Hodgkin lymphoma, iyo inosanganisira varwere vane FL, MCL uye marginal zone lymphoma (MZL) vakadzokera shure kana kuti vari kuramba rituximab. Yechipiri Phase 1/2 muyedzo iri kuongorora BI-1206 musanganiswa ne-anti-PD1 therapy Keytruda® (pembrolizumab) mumamota akasimba.
Dr. Wei-Wu He, Sachigaro weCASI, uye CEO vakati, "BioInvent inoramba ichifambira mberi nekuvandudza uye kutonga kweBI-1206. Mvumo yeCTA muChina muna Zvita 2021 uye ichangoburwa FDA Orphan Drug Designation inoratidza kugona kwakasimba kweiyi yekutanga-mu-kirasi antibody. CASI ine kodzero dzekutengesa dzekuChina dzeBI-1026, uye timu yedu iri kugadzirira Chidzidzo chekiriniki yeChina. CASI neBioInvent vadyidzani vasina musono uye vane chinangwa chakafanana chekubatsira varwere vane tekinoroji yemishonga.